ထိခိုက်တုံ့ပြန်လွယ်သော အသားအရေအကြောင်း သိကောင်းစရာ | BIODERMA
ထိရှတုံ့ပြန်လွယ် sensitive အရေပြားဆိုသည်မှာ ကျဉ်ခြင်း၊ တင်းကြပ်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ လောင်မြိုက်ခြင်း၊ တခါတရံ ယားယံခြင်း လက္ခဏာများဖြစ်ပြီး အရေပြားနီမြန်းခြင်းအမြဲတွေ့ချင်မှတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အများစုသော အလှကုန်ပစ္စည်များကို ခံနိုင်ရည်မရှိတတ်ကြပေ။
ကျွန်ုပ်တွင် sensitive (သို့) ခံနိုင်ရည်အားနည်းသော အသားအရေရှိမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ထိရှတုံ့ပြန်လွယ် နှင့် ခံနိုင်ရည်အားနည်းသော အရေပြားသည် ပုံမှန် အရေပြားထက် ပိုမို တုံ့ပြန်သည်။ လွန်စွာ တုံ့ပြန်နေသည်။ စူးရှခြင်း၊ ပူခြင်း၊ စပ်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း (တွေ့ရခဲ)၊ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်တတ်သည်။ တခါတရံ နီမြန်းခြင်းနှင့် ပေါင်းတွေ့ရတတ်သည်။ ဤကဲ့သို့ခံစားရမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန် အရေပြားတွင် တုံ့ပြန်မှုမရှိသော်လည်း sensitive skin များသည် ခံနိုင်ရည်အားနည်းလွန်းနေသောကြောင့် ဆိုးရွားစွာ တုံ့ပြန်မှုခံရသည်။
သဘာဝတရားအရ UV ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ ပူလွန်းအေးလွန်းသောရာသီ၊ လေ၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း
ဓာတုဆိုင်ရာ အလှကုန်များ၊ ဆပ်ပြာ၊ ရေ၊ အမျိုးသားများ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သုံးပစ္စည်း စသဖြင့်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်အတက်အကျ စသဖြင့်။
ဟော်မုန်း ဓမ္မတာစက်ဝိုင်း စသဖြင့်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း တုံ့ပြန်မှု၊ စပ်သောအစားအစာများ စသဖြင့်
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း တုံ့ပြန်မှု၊ စပ်သောအစားအစာများ စသဖြင့်
Sensitive (သို့) ခံနိုင်ရည်နည်း အရေပြားသည် တခြားအရေပြားအမျိုးအစားတွေက တုံ့ပြန်မှုမရှိသောအရာကို တုံ့ပြန်တတ်ကြသည်။ ဤသို့တုံ့ပြန်လွန်းနေသည်မှာ ခံနိုင်ရည်အားအလွန်နည်း၍ဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုများလေ ခံနိုင်ရည်နည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ Sensitive skin သည် ခဏတာဆိုသလို ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ခံနိုင်ရည်အားနည်းသော အရေပြားသည် ဆက်တိုက် တုံ့ပြန်နေပြီး ခံနိုင်ရည်အားလည်း လုံးဝမရှိပေ။
အရေပြားအထိခိုက်မခံမှုကို ဘာတွေက ဖြစ်လာစေသလဲ?
ပထမတစ်မျိုးမှာ အ‌ရေပြားအပေါ်လွှာရှိအကာကွယ်လွှာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ မမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သည့်အတွက် အရေပြား ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးလာပြီး ပြင်ပမှ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောအရာများ ဝင်ရောက်ထိုးဖောက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
နောက်အချက်ကတော့ sensitive skin တွေက အရေပြားကိုရောင်ရမ်းစေတတ်သောအရာများကို အရေပြားဆဲလ်များမှ လွန်စွာထုတ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်ပြီး မသက်မသာခံစားရမှုများ ဖြစ်လာရသည်။ Sensitive နှင့် ခံနိုင်ရည်အားနည်းအရေပြားတွေက ဓာတ်တိုးစေသောအရာတွေကိုပါ မြောက်များစွာထုတ်လုပ်နေကြသည်။
Sensitive skin သည် လူဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံတွင် တွေ့ရတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများတွင်ပိုတွေ့ရတတ်သည် (၆၀%)၊ အမျိုးသားများတွင် (၄၀%) ဖြစ်သည်။ မိသားစုမျိုးရိုးဗီဇ၊ အသားအရောင်ဖျော့သူများတွင် sensitive skin ဖြစ်တတ်သည်။ သို့သော် အသားအရောင်နှင့် တုံ့ပြန်ထိခိုက်လွယ်မှုကို သတ်မှတ်ချက် မပေးနိုင်ပါ။ အသက်ကြီးလာသည် နှင့်အမျှ တုံ့ပြန်လွယ်မှုသည်လည်း တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားတတ်သည်။
Sensitive skin သည် တခြားသော မျက်နှာအရေပြားရောဂါများဖြစ်သော rosacea၊ eczema သို့် seborrhoeic dermatitis နှင့်တွဲတွေ့ရတတ်သည်။
ထိရှလွယ်သမားများ သတိပြုရမည့်အချက်များကို မလိုက်နာပါက ပိုမိုဆိုးရွားမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Sensitive သမားများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လည်း ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုမရှိပေမယ့်လည်း sensitive သမားတွေမှာ တုံ့ပြန်နေကြသဖြင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုများ၊ အရေပြားဆိုင်ရာကုသမှုများနှင့်လည်း တော်ရုံလွယ်လင့်တကူ ကုသ၍မပျောက်နိုင်ပေ။
အရေပြားပညာရှင်ထံဆွေးနွေးမှုပြုပြီး ထိုပညာရှင်များမှ သင့်အရေပြားတုံ့ပြန်လွယ်မှု ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသည်ကို ရှာဖွေလေ့လာပြီး အကြံပြုချက်ပေးလိမ့်မည်။
အရေပြားတုံ့ပြန်ထိရှလွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ရောဂါများ rosacea၊ eczema သို့ seborrhoeic dermatitis တို့ကြောင့် တုံ့ပြန်ထိရှလွယ်အရေပြားဖြစ်နေပါက အထူးကုသမှုလိုအပ်သည်။
ဆိုးရွားစေနိုင်သော အရာအားလုံးကို တားဆီးသင့်သည်
အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အရေပြားထိခိုက်စေသောပစ္စည်းများ (ပြင်းထန်သော သန့်စင်ပစ္စည်းများ၊ ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့် ဆဲလ်သေဖယ်ရှားခြင်း၊ မသင့်တော်သော ခရင်မ်များ စသဖြင့်)။
အမျိုးသားများ မိမိနှင့်မတည့်သောထုတ်ကုန်များ၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ရေနွေးနှင့် နူးအောင် အနည်းဆုံး ၃ မိနစ်ထားပေးရခြင်း)
နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် အရေပြားပိုမိုတုံ့ပြန်လာခြင်း (ထိုအခါ နေရောင်ကာခရင်မ်ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပါ)။
အလှကုန်ပစ္စည်းများကို လိုသလောက်သာ အသုံးပြုပါ။
မျက်နှာသန့်စင်ရည်ကို အရေပြားအတွက် ခံနိုင်ရည်အား အကောင်းဆုံးတွေကို ရွေးချယ်သုံးပါ။
ရေနှင့်ပြန်ဆေးရန်မလိုသော၊ မွှေးရနံ့မပါသော၊ ဓာတုပစ္စည်းမပါသော၊ ဆပ်ပြာမပါသော အရာတွေကိုရေးပါ။
မျက်နှာအခြောက်ခံလျှင်လည်း ဂရုပြုပါ၊ ပွတ်ဆွဲတာတွေမလုပ်ပါနှင့်။
တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်မှ ၂ ကြိမ်၊ အရေပြားခံနိုင်ရည်အားကောင်းစေသော ထုတ်ကုန်များ (မွှေးရနံ့မပါ၊ ဓာတုပစ္စည်းမပါ၊ surfactant မပါ) အရေပြားအတွက်တုံ့ပြန်မှုနည်းစေသောအရာများကို တားဆီးပေးနိုင်သော ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ပါ။
၁ ပတ် ၁ ကြိမ် မှ ၂ ကြိမ်၊ မျက်နှာအတွက် ထိရောက်စွာ အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ (mask) အသုံးပြုမှုပြုပါ။
မိတ်ကပ်ကို မလိုရင်မသုံးပါနှင့်။ သေချာရွေးချယ်ပါ။
အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အရေပြားကိုသက်သာစေသည်။ အရေပြား ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာများအတွက် အာနိသင်ပိုကောင်းစေသည်။